နိုင်ငံခြားသားများအတွက်ပေါ်တူဂီ LDA / ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
တစ်ဦးကပေါ်တူဂီပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီ (Lda) နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများပေါ်တူဂီစီးပွားရေးလုပ်ဖို့လိုနှင့်အတူရေပန်းစားသည်။ နိုင်ငံခြားသားတွေအနေနဲ့ Lda အတွက်ရှယ်ယာအားလုံးပိုင်ဆိုင်စေနိုင်သည်။
ပေါ်တူဂီမှာသူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂလိကကန့်သတ်သည့်ကုမ္ပဏီများသည်အခြားနိုင်ငံများတွင်ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီများနှင့်ညီမျှနေသော "Sociedad por မဲခွဲတမ်း" (Lda) ဟုခေါ်ကြသည်။ Lda ရဲ့နေထိုင်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအဘို့အပေါ်တူဂီအတွက်ကုမ္ပဏီတွေရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးပုံစံရှိပါတယ်။
ပေါ်တူဂီတစ်ဦးအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏နိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုရွေးချယ်တင်မြှောက်တအိမ်တည်းဥပဒေပြုရေး, တစ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့်အတူတစ်ဦး "ပေါင်းတစ်စည်းတည်း Semi-သမ္မတရွေးကောက်ပွဲသမ္မတနိုင်ငံ" ဖြစ်ပါတယ်။
ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီ (Lda) အကျိုးကျေးဇူးများ
တစ်ဦးကပေါ်တူဂီပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီ (Lda) အကျိုးကျေးဇူးများကိုဤအမျိုးအစားများကိုကမ်းလှမ်း:
•အပြီးအစီးနိုင်ငံခြားရေးပိုင်ဆိုင်မှု: အခွဲတမ်း၏အားလုံး (ရှယ်ယာရှင်များ) နိုင်ငံခြားသားများကပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါသည်။
•တစ်ခုမှာရှယ်ယာရှင်များနှင့်တစ်ခုမှာဒါရိုက်တာ: သာလျှင်တဦးတည်းရှယ်ယာရှင် (ခွဲတမ်းကိုင်ဆောင်သူ) က Lda စုစုပေါင်းထိန်းချုပ်မှုများအတွက်သာလိုအပ်သောညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်လာနိုင်သူလိုအပ်ပါသည်။
•အနိမျ့ဝေမျှမယ်မြို့တော်: အဆိုပါနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက် 5,000 ယူရိုရှယ်ယာမြို့တော်ဖြစ်ပါတယ်။
•အီးယူအဖွဲ့ဝင်: ပေါ်တူဂီဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည် (အီးယူ) အခြားအီးယူအဖွဲ့ဝင်နှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ပိုမိုလွယ်ကူလက်လှမ်းဘို့ခွင့်ပြု။
ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီ (Lda) အမည်
အဆိုပါ "Registo Nacional de Pessoas Colectivas" (ကုမ်ပဏီမြားအမျိုးသား Registry ကို) ကုမ္ပဏီအမည်များကို၏လက်မှတ်ကိုင်တွယ်။
တိုင်း Lda ပေါ်တူဂီအတွက်အခြားမည်သည့်ကုမ္ပဏီအမည်ကိုပုံနဲ့တူတဲ့မထူးခြားတဲ့အမည်အားရွေးချယ်ရပါမည်။ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရေးကျွမ်းကျင်သူများကလျှောက်ထားတဲ့အခါမှာတဦးတည်း၏ခွင့်ပြုချက်အဘို့အသုံးအဆိုပြုကုမ္ပဏီအမည်များကိုတင်ပြအကြံပြုပါသည်။ ကုမ္ပဏီအမည်များကိုကုမ္ပဏီ၏အဆိုပြုထားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုများညွှန်ပြရပေမည်။ တစ်ဦးကအခမဲ့ရရှိနိုင်ပါအမည်များကိုစစ်ဆေးမှုများကြိုတင်မှတ်ပုံတင်ဖို့ဖျော်ဖြေနိုင်ပါသည်။
တစ်ခုခုကိုစကားတို့ကို "Sociedad por မဲခွဲတမ်း" ဟုအဆိုပါကုမ္ပဏီအမည်သို့မဟုတ် "Lda" ၏ယင်း၏အတိုကောက်ရဲ့အဆုံးမှာပေါ်လာရကြမည်။ ထို့အပြင်တစ်ဦးတည်းသောဒါရိုက်တာသူသည်တစ်ဦးကတစ်ဦးတည်းသောရှယ်ယာရှင်ကုမ္ပဏီက၎င်း၏ကုမ္ပဏီအမည်အားရဲ့အဆုံးမှာဒီစကားလုံးက "unipessoal" ဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
အဆိုပါ Lda စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုများအမျိုးမျိုးအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ပါတယ်။ "စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ့ဆုံမှုအမျိုးအစားများ, စီးပွားဖြစ်စက်မှုဇုန်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလှုပ်ရှားမှုများပါဝင်ပါသည်": အစည်းအရုံး၏စာချွန်လွှာတိကျတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုများကိုဖော်ပြရန်နိုင်ပါတယ်နေစဉ်, စံအလေ့အကျင့်ဟာစာချွန်လွှာကဲ့သို့သောကျယ်ပြန့်ဖော်ပြချက်များကိုရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
အစိုးရအ Registry ကိုအသစ်သောကုမ္ပဏီများအတွက်အားလုံး applications များကိုင်တွယ်။
အဆိုပါခွဲတမ်းနှင့် ပတ်သက်.a"ကိုရောင်းချခြင်းနှင့်လွှဲပြောင်းသဘောတူညီချက်" နှင့်အတူအသင်းမှအဆိုပါဆောင်းပါး (အစုရှယ်ယာ) တစ်ဦးသက်သေခံရှေ့နေများ၏ရှေ့မှောက်၌လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်ဖြစ်သည်။ တည်ထောင်သူပေါ်တူဂီသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းနိုင်ငံခြားသားများဖြစ်ကြသည်ဆိုရင်သူတို့ကနိုင်ငံတကာကအသိအမှတ်ပြု Apostille သို့မဟုတ်ဖွဲ့စည်းရေးကုမ္ပဏီနှစ်ခုတရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများလက်မှတ်ရေးထိုးရန်ခွင့်ပြုတဲ့နိုင်ငံခြားသက်သေခံရှေ့နေများကအသိအမှတ်ပြုရှေ့နေချုပ်တစ်ဦးကို Power ထုတ်ပေးလိမ့်မည်။
ပြီးတာနဲ့အတည်ပြုခြင်း, Registry ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်းတစ်ဦးလက်မှတ်နှင့်ယာယီအခွန်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကဒ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်တစ်ဦးပြည်သူ့ကျန်းမာရေး Registry ကိုကငျြ့နေတဲ့သက်သေခံရှေ့နေများ၏ရှေ့မှောက်၌လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်ဖြစ်သည်ရာထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ ကြောင်းပြီးစီးခဲ့သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်, မှတ်ပုံတင်ကို "Direcção-Geral dos Impostos" (အစိုးရအခွန်ရုံး) နဲ့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်ဟာ Lda ဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါရှယ်ယာရှင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုနေထိုင်မည်သည့်နိုင်ငံကနေတကျွန်းတနိုင်ငံသားဖြစ်စေနိုင်သည်။ တစ်ဦးချင်းစီနှင့်ကော်ပိုရိတ်အလောင်းတွေရှယ်ယာရှင်များဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ရှယ်ယာရှင်များအဘယ်သူမျှမအများဆုံးအရေအတွက်ကရှိပါသည်။
အဆိုပါ Lda မဟုတ်ဘဲအသင်းမှ၏ဆောင်းပါးများတွင်ဖော်ပြထားသည့်ရှယ်ယာထက်ခွဲတမ်းရှိပါတယ်။ ခွဲတမ်းသာပြည်သူ့အကျင့်ကိုကွပ်မျက်ခြင်းဖြင့်လွှဲပြောင်းနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါရှယ်ယာရှင်ဆင်တူ, တစ်ဦးတည်းသာဒါရိုက်တာ Lda ဘို့လိုအပ်ပါသည်။ တစ်ဦးတည်းသောရှယ်ယာရှင်ပိုကောင်း Lda စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ရန်တစ်ခုတည်းသောညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်လာပေမည်။ သဘာဝလူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ကော်ပိုရိတ်အလောင်းတွေဒါရိုက်တာဖြစ်လာပေမည်။ ဒါရိုက်တာမဆိုတိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံသားများဖြစ်နဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုတွင်သို့မဟုတ်ပေါ်တူဂီပြင်ပတွင်နေထိုင်နိုင်ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းသောညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်ပါတယ်သူတစ်ဦးတစ်ဦးတည်းသောရှယ်ယာရှင်ရှိပါတယ်သောအခါ, ကုမ္ပဏီအမည်ကို၎င်း၏အမည်ကို၏အဆုံးမှာစကားလုံး "unipessoal" တို့ပါဝင်သည်ရမည်ဖြစ်သည်။
တိုင်း Lda အရေးကြီးသောသတိပေးချက်များနှင့်အခွန်ပုံစံများကိုလက်ခံရရှိရန်မှတ်ပုံတင်ရုံးလိပ်စာရှိရမည်။ ကုမ္ပဏီ၏စာရင်းကိုင်မှတ်တမ်းများနှင့်မှတ်ပုံတင်များအားလုံးသည်မှတ်ပုံတင်ရုံးမှာထိန်းသိမ်းထားကြသည်။ အဆိုပါ Lda ဖွဲ့စည်းအဆိုပါပေါ်တူဂီကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ရုံးအဖြစ်၎င်းတို့၏ရုံးလိပ်စာပေးနိုငျခဲ့ဖြစ်သင့်သည်။
ဒါရိုက်တာတစ်ဦးက Registry ကိုပုဂ္ဂလိကနှင့်အများပြည်သူဆိုင်ရာစစ်ဆေးခြင်းများအတွက်မရရှိနိုင်သည့်မှတ်ပုံတင်ရုံးမှာထားရပေမည်။
လိုအပ်သောနိမ့်ဆုံးရှယ်ယာမြို့တော်မှတ်ပုံတင်ရေးမတိုင်မီအပြည့်အဝဖွင့်ပေးချေရမည်ဖြစ်သည့် 5,000 ယူရိုဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးကအရံမြို့တော်နှစ်တိုင်းအရံထည့်သွင်းအကျိုးအမြတ် 5% နှင့်အတူမည်သည့်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်တတိယပါတီများမှပေးဆောင်အထိသတ်မှတ်ရမည်။
နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ပြန်ချက်များအင်တာနက်အားဖြင့်တင်သွင်းနိုင်သည့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်တင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါနောက်ဆုံးနေ့ယခင်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကနေဇွန်လကုန်ဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီကို "ကြီးမားသော" ကုမ္ပဏီအဖြစ်ခွဲခြားဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်လျှင်စာရင်းစစ်မလိုအပ်ပါ။
အဆိုပါပေါ်တူဂီကော်ပိုရိတ်အခွန်နှုန်းကို 21% ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်ရှိသောပုံမှန် 15,000% နှုန်းအခွန်ကောက်နေစဉ်သို့သော်ပထမဦးဆုံး 17 ယူရိုတစ် 21% နှုန်းအခွန်ကောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ Registry ကိုနှင့်ခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူတင်သွင်းပြင်ဆင်အားလုံးကိုလိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများများအတွက်နှစ်ပတ်အတွင်း, အထိကြာလိမ့်မည်။
တစ်ဦးကပေါ်တူဂီပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီ (Lda) ဤအကြိုးခံစားခှငျ့ရှိပါတယျ: နိုင်ငံခြားသားရှယ်ယာအားလုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီး, အနိမ့်ရှယ်ယာမြို့တော်, အီးယူအဖွဲ့ဝင်များနှင့်တဦးတည်းရှယ်ယာရှင်ထက် သာ. ကြီးမြတ်သောထိန်းချုပ်ရေးအတွက်တစ်ခုတည်းသောညွှန်ကြားရေးမှူးနိုင်ပါတယ်။